Canug 13-18 sano jirActuellement sélectionné
Dhallinyaro badan marka ay dhawr iyo toban jir noqdaan waxaa ay billaabaan in ay iska xureeyaan waaliddiintooda. Waxay rabaan in ay iskood isu bixiyaan oo ay isu diyaariyaan nolosha dadka waaweyn. Waaliddiinta mas’uuliyad ayaa ka saaran in ay taageeraan safarka carruurtooda ee ku aaddan caalamka dadka waaweyn. Waa muhiim in isu dheelli tir la helo si xudduudo loogu sameyn karo canugga. Isla markaasna waa in canuggu uu waddanka cusub horuumar ku sameyn karyo.
Halkan ka akhriso waxbadan oo dugsiga ku aaddan.
Warbixin kasii akhriso warqada warbixinta "Ku socoto adiga waalidka ah – Ku saabsantahay khamriga".
Dhammaan in lagu shaqo la ahaado mukhaadaraadka kanabis waa sharci ku xad gudbid – in la abuuro, la iibsho, la gato, la isticmaalo iyo meel lagu keediyo.
Khamriga Iyo Dhallinyarada
Ku saabsan khamriga
Ku saabsan kanabis